'Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta'eera' - Boontuu Baqqalaa Garbaa - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Baqqala Garbaa dabalatee hoggantoota paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo biroo sadi irratti 'dhaddacha jeeqxan' jechuun dhaddachi afraffaa mana murtii olaanaa federaalaa damee Lidataa hidhaa ji'a jahaa irratti murteesse.
Hoggantoonni KFO hidhaan irratti murtaa'es, Obbo Baqqala Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Addisuu Bullaallaa dha.
Himatamtoonni kunneen murtee manni murtichaa hoggantoonni mootummaa olaanoo ragaaf waamaman mana murtiitti akka hin dhiyaanne murteesse waan mormaniif 'dhaddacha jeeqxan' jedhamanii hidhaan ji'a jahaa kan itti murtaa'e.
Obbo Baqqalaan yeroo dhaddachi dhimmi kana ilaalaa turetti dhaabachaa turan.
"Himatamtoonni kunneen murtee manni murtichaa kennan irratti yaada qabna jedhanii gaafannaan, manni murtii yaada irraa fuudhuuf hayyamamoo ta'uu dide sana booda ofiin yaada isaanii ibsachuu eegalan," jetti dhaddacha sanarra kan turte Boontuu Baqqalaa Garbaa.
"Yaada qabna jedhanii harka baasaa turanii, yaada irraa fuudhuuf hayyamamoo hin taane, achii booda hundi isaanii walfaana yaada nu harkaa fuudhuu qabdu, isin nun dhaggeeffattan taanaan, nus dirqama isin dhaggeeffachuu hin qabnu jedhanii morman. dhumarrattis faaruu qabsoo yeroo maa'ikalaawii turan barreessan waljalaa qabanii faarfachuu eegalan, sanaan dhaddachi adda cite," jetti Boontuun.
Haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo ta'eera
"Nutis taane Baqqalaan sirna kanarraas ta'e mana murtii irraa haqan argadha jedhee yaadee hin beeku, haqa dhabuun hiree hidhamtoota Oromoo hundaa ta'eera," jetti.
Manneen murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatti Abukaatoo kan ta'an obbo Ibsaa Gammadaa, manni murticha jalqabumarraa adeemsa seeraa cabse jedhu.
"Ragaa ittisaa abbaan dhiyeeffatu na fayyada, narraa ittisa jedhee dhiyeeffata waan ta'eef manni murtii gonkuma siif dhiyaachuu hin qaban jechuu hin danda'u akka seeraatti," jedhu Obbo Ibsaan.
Himata 'dhaddacha jeequu' jedhus yeroo mara abbootiin murtii kabaja dhunfaa isaaniif jecha akka malee itti fayyadamu kan jedhan obbo Ibsaan, "osoo himannaan isaanii adda citee ni gadhiifamu jedhamee eegamu kun murtaa'uun isaa ergaa siyaasaa qaba," jedhu.
Namootni Ginboot Sabaat waliin hidhata qabu jedhamanii himatamanii dhaddachicharra turan himatamtoonni sadi biroos, wayita Obbo Baqqalaan fa'i morman harka walitti rukkuttan jedhamanii hidhaan ji'a sadii itti murtaa'ee jira.
Manni murtichaa dhaddacha waaree boodaatiin, mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa kan ittiin jedhu Ginboot sabaat waliin hariiroo qabdu jedhamanii kan himataman namoota 33 irratti hidhaa waggaa 15 hanga 18 murteessee jira.
Manni murtichaa dhimma himatamtoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti himataman irratti murtee kennuuf Amajjii 10 'tti beellama qabatee jira.
Ministira muummee dabalatee hoggantoonni naannoo Oromiyaa kanaan dura ragaa ittisaaf waamamanis sababa hojiin akka hin dhiyaanne xalayaadhaan beeksisani turan.
Ministirri muummee Haayila Maariyaam Dassaalany torban darbe namoonni siyaasaa hidhaa jiraniifi dhimmi isaanii ilaalamaa jiru akka hiikaman dubbatanis hanga yoonaa wanti dhagahame hinjiru.
Hidhamtooti siyaasaa akka gadi dhiifaman murtaa'e